I-Tilmicosin Phosphate I-Tilmicosin phosphate yeyona nto intsha iphuhlisa intsholongwane ye-macrolide kwimpilo yezilwanyana, yeyona nto isusela kwisifo se-tylosin, esisetyenziselwa ikakhulu ukukhusela izifo zesifo esibuhlungu sokuphefumla, i-mycoplasmosis, ukosuleleka yintsholongwane kwihagu, inkukhu, iinkomo, iigusha. Igama: Ifomula yeTilmicosin Phosphate yeMolekyuli: C46H80N2 O13 · H3PO4 Ubunzima beemolekyuli: 967.14 I-CAS: 137330- 133 IiPropathi: ukukhanya okuphuzi okanye i-yellow yellow, kunganyibilika emanzini. Imigangatho: Enterprisestandard, a ...
I-Tilmicosin I-Tilmicosin yeyona nto intsha iphuhlisa intsholongwane ka-macrolide yempilo yezilwanyana, sisifo esisemzimbeni esivela kwi-tylosin, esisiseko esisetyenziselwa ukukhusela izifo zesifo sokuphefumla okungapheliyo, isifo se-mycoplasmosis, usulelo lwebhaktiriya kwihagu, inkukhu, iinkomo, iigusha. Igama: I-Tilmicosin ifomula yeMolekyuli: C46H80N2O13 Ubunzima beemolekyuli: 869.15 I-CAS no: 108050-54-0 Iipropathi: ukukhanya okuphuzi okanye okuphuzi. Imigangatho: Ukupakishwa kwe-Usp34: Isigubhu se-20kg / sekhadibhodi, 1kg / idrum yedrum e-6 kwibhokisi enye. Imile ...
I-Tiamulin Hydrogen Fumarate
I-Tiamulin Hydrogen Fumarate I-Tiamulin hydrogen fumarate yintsholongwane esebenzayo kunyango lwezilwanyana, isetyenziswa ikakhulu ekukhuseleni ukugula kwenkqubo yokuphefumla yehagu kunye nenkukhu, inokunyusa ukukhula kwezilwanyana. Igama: I-Tiamulin hydrogen fumarate ifomula yeMolekyuli: C28H47NO4S · C4H4O4 Ubunzima bemolekyuli: 609.82 CAS no: 55297-96-6 Ipropathi: Umhlophe okanye umhlophe-njengesiqhelo somgubo: I-USP34 Ukupakisha: 25kg / ikhadibhodi Ukugcinwa kwendawo: gcina kwindawo enombane, indawo yomoya kunye nendawo eyomileyo. Umxholo: ≥98% Ap ...
IFlorfenicol Sodium Succinate Igama leMveliso: IFlorfenicol sodium enisa iipropathi zeKhemikhali: Umgubo omhlophe okanye omhlophe-ofana ne-crystalline, awunamveliso kwaye awunambeko, xa umswakama womoya uphakamileyo we-rendestcent ayikho ngaphantsi kwe-95%. Isici seMveliso: 1. IFlorfenicol sodium encedisayo yenza iFlorfenicol solubility iye kwi-300mg / ml kwaye yongezwe amaxesha angama-400. 2. IFlorfenicol isodium incedisa ...